Madaxweyne Morsi oo ku gacansaydhay digniinta milateriga - BBC News Somali
Madaxweyne Morsi oo ku gacansaydhay digniinta milateriga
2 Luulyo 2013
Image caption Fakaaraha Taxriir ee Qaahira
Madaxweynaha dalka Masar Maxamad Morsi ayaa ku gacansaydhay digniinta kama dambaysta ah ee hoggaanka milaterigu ku siiyey xukuumadda dalkaasi iyo mucaaradka labadaba in muddo 48 saacadood ah gudahood ay la yimaaddaan xal wax lagaga qabanayo xiisadaha dalkaai.
Madaxweyne Morsi waxa uu sheegay in aan lagala tashan go'aankaasi milateri, sidaasi awgeedna uu ku soconayo qorshihiisa siyaasadeed ee dib-u-heshiisiinta. Waxanu ku tilmaamay go'aankan milaterigu in uu sii xumaynayo oo keliya xiisadaha dalkaasi haatan ka socda.
Milaterigu waxay ku hanjabeen inay soo faragelin doonaan haddii aan dawladda iyo mucaaradku la iman xal siyaasadeed, laakiin waxay beeniyeen in taas ay uga jeedaan inay ku kici doonaan inqilaab milateri.
Dhinaca kale, ilaa hadda waxa iscasiley ilaa lix wasiir oo ka tirsanaa xukuumadda madaxweyne Maxamad Morsi, kuwaasi oo uu ku jiro wasiirkii arrimaha debadda Maxamad Kaamil Amr.
Waxa kale oo halkoodii ka sii socda mudaaharaadyadii rabshadaha watey oo dad ku dhinteen, in kale oo badanina ay ku dhaawacmeen maalmahani. Isniintii shalay waxa la weeraray, lana bililiqaystay xaruntii ururka Ikhwaanu-Muslimiin ee magaalada Qaahira. Axaddii dhaweydna, malaayiin qof ayaa la sheegay inay bannaanbaxyo ka oogeen dhammaan magaalooyinka dalka masar, kuwaasi oo ku baaqayey in madaxweyne Maxamed Morsi uu iscasilo.